FIFIDIANANA DEPIOTE : Biletà tokana atonta tatsy Afrika Atsimo miisa 67 000 voatonta hanofanana mpifidy
Afak’omaly no tonga ireo biletà tokana andiany voalohany natonta tatsy Afrika Atsimo. 1er avril 2019
Miisa 67 000 izy ireo izay hampiofanana ny olom-pirenena. Avy hatrany dia tsinjaraina amin’ny fiarahamonim-pirenena ireo biletà tokana ireo hanoroana lalana ireo mpifidy mahakasika ny fampiasaina ny biletà tokana amin’ny andron’ny latsa-bato. Araka ny fanazavana noentin’ny filoha lefitry ny Vaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana (Céni), Rakotonarivo Thierry anefa dia tsy ny fiarahamonim-pirenena rehetra no homena ireo biletà tokana ireo fa ireo izay misahana ny fanabeazana ny olom-pirenena momba ny fifidianana irery ihany, ary ireo izay nahazo fankatoavana avy amin’ny Céni fa mahazo misahana izany andraikitra izany.
“Ireo biletà tokana ireo dia hanaovana fampiofanana ny mpifidy sy fampianarana azy ireo. Ireo dia hozaraina amin’ny fiarahamonim-pirenena izay misahana ny fanabeazana sy fampianarana mahakasika ny fifidianana ary izay nahazo fankatoavana sy fanekena avy amin’ny Céni”, hoy ny fanazavany. Sokajy voalohany tamin’ireo natonta ihany ireto tonga ireo fa andrasana afaka andro vitsy ihany koa ny fahatongavan’ny sokajy faharoa. Ity farany dia hozaraina amin’ireo kandidà nilatsa-kofidiana sy ireo mpanohana azy. Mazava ho azy fa hampiasaina mandritra ny andron’ny fampielezan-kevitra anentanany ny vahoaka.
Mahatratra 101 250 ny isan’izy ireo ary 125 isany avy ny anjaran’ny kandidà tsirairay avy manerana ny nosy. Fantatra fa azon’ireo kandidà tsara ny manao dika mitovy an’ ity biletà tokana miankina amin’izay isa tadiavin’izy ireo ity. Raha tsy misy ny fiovana dia amin’ny faha-3 ny volana mey ho avy izao kosa no ho tonga ny sokajy fahatelo amin’ny biletà tokana. Ity sokajy ity ilay ampiasaina mandritra ny andron’ny latsa-bato ka ny Céni irery ihany no mandray an-tanana azy sy ny fomba hoentina hanapariahana izany manerana ny Nosy. Miisa 3 700 000 ny isan’izy ireo. Araka ny fanazavana voaray hatrany dia hisy ny fampiofanana omena ireo delegen’ny Kandidà sy ireo solontenan’ny Céni eny anivon’ ny Faritra sy ny Distrika. Izany no atao dia mba hahatanteraka ny fifidianana ao anatin’ny filaminana.
Nitombo ny isan’ny biraom-pifidianana
Nahitana fiakarany ny isan’ireo birao fandatsaham-bato amin’ny fifidianana solombavambahoaka raha oharina tamin’ny fifidianana Filoham-pirenena. Antony, raha ny fanazavana, dia noho ny fiakaran’ny tahan’ny mpifidy voasoratra anarana anaty lisitra. Mahatratra 25 365 ny isan’ireo biraom-pifidianana manerana ny nosy amin’ny 27 mey, daty hanatanterahana ny fifidianana Depiote manerana ny Nosy. Araka ny fanazavana hatrany dia tsy nisy akory ny fanokafana birao vaovao fa fanasarahana no natao. Mipetraka hatrany ny lalàna iraisain’ny rehetra toy ny hopitaly, fiangonana, tobin’ny mpitandro filaminana dia tsy azo anaovana fandatsaham-bato. Fantatra fa mbola mety hisy fiovany io isan’ny birao fandatsaham-bato io raha misy ny antony tsy azo anoharana.